Dhaxalsugaha Sucuudiga Mohamed Bin Salaman Oo Booqday Hollywood-ka | Araweelo News Network
Dhaxalsugaha Sucuudiga Mohamed Bin Salaman Oo Booqday Hollywood-ka
Los Angeles, California(ANN)-Ninka leh dhaxalka boqortooyada Sucuudiga Maxamed Binu Salmaan ayaa aad loogu soo dhaweeyay naadiga hobolada aflaamka ee Hollywood-ka ee dalka Maraykanka, kadib markii Sucuudiga uu mamnuucis ka qaaday daawashada aflaamta.
Muddo 35 sano ayay aflaamta mamnuuc ka ahaayeen Sucuudiga, Waxayna qaadista xayiraadaasi u muuqataa mid ay si weyn usoo dhaweeyaan dadka maalgashada aflaamta iyo kuwa sameeya intuba.
Wuxuu intaas ku daray in uu Sucuudiga u qaadan doono Khamriga loo yaqaano tequila oo ka mid ah kuwa ugu qaalisan.
Khamriga iyo Sucuudiga?
Hoteelkan oo dhan waxaa wada kireystay waftiga Maxamed Binu Salmaan
Waftiga balaadhan ee la socday Maxamed Bin Salmaan ayaa qabsaday hoteelkii oo dhan, iyada oo meeshana lagu soo bandhigay wax kasta, laga bilaabo muusig illaa cunto ceyn kasta leh iyo sharaab.
Sharaabkaas waxaa ka mid ah khamriga oo noocyo aad u kala duwan ah, waxayna ahayd habeen aad loo caweeyay, si balaarana loo kifaaxay.
Rick waxa uu doonayaa in uu Sucuudiga geeyo Kayntiisa guurguurta ee lagu magacaabo The Marvel Experience. Halkaas oo waxyaabaha ceynkan oo kale ah ay mamnuuc ka ahaayeen.